नेप्से र कारोबार दुवै घट्यो - Naya Patrika
काठमाडौं, २० पुस | पुष २०, २०७४
बुधबार नेप्से परिसूचक २० दशमलव ६३ अंक घटेको छ । अघिल्लो दुई दिन बढेको बजार यस दिन भने १ दशमलव ४४ प्रतिशत घटेर १ हजार ४ सय १६ दशमलव ६१ बिन्दुमा पुगेको छ । बजार खुलेको केही समयपछि नेप्से ओरालो लागेको थियो । निरन्तर ओरालो लागेको बजार सोमबार र मंगलबार बढेपछि लगानीकर्ता नाफा सुरक्षित गर्न थालेका छन् । फलस्वरूप यस दिन बजार ओरालो लागेको हो । तरलता अभावका कारण ब्याजदर बढ्न थालेपछि बजार ओरालो लागेको थियो । तर, आइतबार बैंकहरूले ब्याजदर नबढाउने सहमति गरेपछि सोमबार बजार उकालो लागेको थियो । सस्तोमा सेयर खरिद गरेका लगानीकर्ताले यस दिन सेयरबिक्री गरी नाफा सुरक्षित गर्नाले बजार घटेको एक ब्रोकरले बताए ।
नेप्से परिसूचकसँगै यस दिन कारोबार रकम पनि घटेको छ । अघिल्लो दिनको तुलनामा यस दिनको कारोबार रकम रू. १८ करोड ७६ लाख घटेको छ । यस दिन १ सय ५५ कम्पनीको ५ हजार ५९ पटकको कारोबारमा रू. ४४ करोड ५५ लाख ४६ हजार ५ सय ७५ बराबरको ८ लाख ९० हजार ४ सय ६३ कित्ता सेयर खरिदबिक्री भएको छ । लगानीकर्ताको सम्पत्ति घटेर रू. १६ खर्ब ४८ अर्बमा सीमित भएको छ । ‘क’ वर्गको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ इन्डेक्स यस दिन ४ दशमलव ३९ अंक घटेर २ सय ९८ दशमलव शून्य ७ बिन्दुमा पुगेको छ । नेप्सेको १४ दिने आरएसआई यस दिन ३४ दशमलव १५ स्केलमा पुगेको छ । न्युट्रल जोनमा रहेको यस आरएसआईले बजारमा सेयर खरिदबिक्री चाप सन्तुलनमा रहेको संकेत गर्दछ ।
रकमका आधारमा यस दिन नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीको सबैभन्दा धेरै सेयर खरिदबिक्री भएको छ । यस दिन सो कम्पनीको रू. ४ करोड ३० लाखबराबरको सेयर खरिदबिक्री भएको छ । त्यसैगरी, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेडको यस दिन रू. ३ करोड ९१ लाख र प्रभु बैंकको रू. ३ करोड ८७ लाखभन्दा बढीको सेयर किनबेच भएको छ । मल्टिपर्पोज फाइनान्स कम्पनीको सेयरमूल्य यस दिन ५ दशमलव ६० प्रतिशत बढेको छ । महिला सहयात्रा माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेडको सेयरमूल्य भने यस दिन ६ प्रतिशत घटेको छ । कारोबारमा आएका १ सय ५५ कम्पनीमध्ये १६ कम्पनीको मात्र सेयरमूल्य बढेको छ भने १ सय २९ कम्पनीको सेयरमूल्य घटेको छ । बाँकी १० कम्पनीको सेयरमूल्य यस दिन स्थिर रहेको छ ।
बुधबार कारोबारमा आएका सबै समूहको परिसूचक ओरालो लागेको छ । यस दिन ‘अन्य’ समूहको परिसूचक सर्वाधिक २ दशमलव ४९ प्रतिशत घटेको छ । त्यसैगरी, बिमा समूहको परिसूचक १ दशमलव ८२ प्रतिशत, माइक्रोफाइनान्स समूहको १ दशमलव ५३ प्रतिशत, होटेल समूहको १ दशमलव ३६ प्रतिशत, जलविद्युत् समूहको १ दशमलव ३४ प्रतिशत, बैंकिङ समूहको १ दशमलव ३१ प्रतिशत र विकास बैंक समूहको १ दशमलव शून्य ६ प्रतिशत घटेको छ । कारोबारमा आएको ट्रेडिङ समूहको परिसूचक शून्य दशमलव ६९ प्रतिशत, वित्त समूहको शून्य दशमलव ६५ प्रतिशत र उत्पादनमूलक समूहको शून्य दशमलव शून्य ६ प्रतिशत घटेको छ ।